Ady Totohondry Malagasy Voaray tetsy amin’ny MJS omaly
Noraisin’ny solontenan’ny MJS “minisiteran’ny tanora sy fanatanjahantena Malagasy” nihaona taminy tetsy Andohananalakely omaly alakamisy 08
aogositra 2019 ireo solontenan’ny ligim-paritry ny taranja ady totohondry Malagasy nahitana ny avy eto Analamanga, V7V, Matsiatra Ambony, Atsinanana ary Amoron’i Mania, noho ny fangatahan’izy ireo hiresadresaka mivantana amin’Atoa minisitra Tinoka Roberto mahakasika ny olana mianjady eo amin’ny fitantanana an’ity taranja sahanin-dry zareo ity. Efa ho herinandro izahay no tonga teto an-drenivohitra ka nangataka an’io fihaonana io, hoy izy ireo, ka izao voaray soa aman-tsara izao ka hisaorana ny tompon’andraikitry ny MJS. Noho ny fahasahiranan’Atoa minisitra sy ireo tale eo ambany fiadidiany amin’ny fikarakarana ny atletantsika ho any Maraoka hiatrika ny lalao Afrikanina dia ny solontenany no nandray anay. Vosaresaka tao amin’ny dinika nifanaovana ny amin’ilay antontan-taratasy fitarainana nalefanay mahakasika ny olana mianjady amin’ny ady totohondry Malagasy. Nahavelom-bolo, hoy izy ireo, fa tsapan’ny tompon’andraikitr’ity minisitera ity sy ireto olona niresaka taminay ireto ny olona mianjady amin’ny ady totohondry Malagasy sady nahita nivantana tany Maorisy koa ny antony tsy nahombiazan’ny mpikatroka ady totohondry Malagasy tany ary diso fanantenana tamin’izany. Antenainay, hoy ihany ireto solontenan’ny ligy ireto, fa aorian’io lalao Afrikanina any Maraoka io dia hisy ny fiantsoan’ny MJS anay ka hamahana ny olana. Aminay, mbola haverina ihany ny antso amin’ny tokony hanatanterahana amin’izay ny fifidianana ho filoha vaovaon’ny ady tohondry Malagasy hamerenana indray ny lazany hatrizay.